I-Shelf Corporation ne-Aged Company Glossary of Terms
Izinkampani zeshelufu noma ngaphandle kwamashalofu izinkampani ezakhiwe ngosuku olwandulelayo. Inhlangano enjalo ibizwa nangokuthi inkampani endala yamashalofu. Imininingwane eminingi ewusizo nokusekelwa kocwaningo ngalesi sihloko kulandelayo.
Inhlangano esegugile noma ishelufu lenhlangano alinabanikazi bamasheya futhi, ngokuvamile ngaphandle kwalapho lifunwa lifakwa ukugcina inkampani isesimweni esihle, ingahle ingenabaphathi noma abaqondisi. Uma usutholile ungafayela uhlu lwamagosa nabaqondisi ngegama lakho. Kubalulekile ukusebenzisa inkampani yakho ngendlela yezomthetho, yokuziphatha neyokuziphatha.
Ungemukela ezinkampanini zeshalofu ngegama elikhona manje noma singashintsha igama lenkampani libe elinye igama uma ufisa. Ungaba yisikhulu esisha nabaqondisi noma ungakwazi noma ukhethe ezinye izikhulu nabaqondisi abamukela lesi sikhundla. Futhi, igama lenhlangano lingashintshelwa kwelinye igama elikhona lokukhetha kwakho.
Inkampani Yabantu Abadala Abaphephela
Uzothola izindatshana zokufakwa kwenhlangano endala yamashalofu noma izindatshana zenhlangano zesherifu elalikhulile le-LLC. Lezi zihloko zizofakwa isitayela ngumbuso, isifundazwe, izwe noma amandla lapho kwakhiwa khona ekuqaleni. Uyakwazi ukuthola inombolo kamazisi yokuqashwa yomfelandawonye (i-FEIN), ebizwa nangokuthi Inombolo Yokukhonjwa Kwentela noma inombolo ye-ID. Uzothola incwadi yokurekhoda yenkampani, incwadi enkulu equkethe imibhalo yenkampani ebalulekile. Uzonikezwa izitifiketi zesitoko sebhizinisi noma izitifiketi zobulungu ze-LLC. Izitifiketi azinalutho futhi azilungile. Uzokwamukela nemizuzu yamafomu emihlangano, unyaka owodwa wezinsizakalo ze-ejenti ezibhalisiwe, uphawu lwenkampani kanye nokuxhaswa ngocingo ukuphendula imibuzo yakho.
Izinhlangano zamashalofu azinazo izikweletu zentela noma izibopho zomthetho. Balungele ukuvula i-akhawunti yasebhange, baqale ukwakha isikweletu senkampani, futhi baqale ibhizinisi.
Kungani Kufanele Uzuze Inkampani Yakho Yeshelu?
Lapho ibhizinisi lineminyaka ethile ngemuva kwalo, isithombe salo singathuthukiswa. Isibonelo, uma ubesebhizinisini lokulungisa izithombe ze-10 iminyaka bese uthola inkampani eyi-10 unyaka wonke ukuze ihambisane neminyaka yakho ebhizinisini, lokhu kungakhulisa ukuthembeka kwakho kwebhizinisi. Abanye ababolekisi bangahle bathambekele ekuzimiseleni kakhulu inkampani yakho futhi abakhiqizi nabathengisi bezitolo bazimisele ngokwengeziwe ukunikela ngemibandela yokuxhaswa ngezimali uma empeleni ngabe ukulelayini linye lebhizinisi iminyaka eminingi. Asisho ukuthi ibhizinisi elinjalo liqinisekisa lezi zinzuzo, kepha zingakunikeza umphetho omncane ngokungeziwe kwezinye izinto ezibalulekile.
Ngokungethembeki kwebhizinisi, nazi ezinye izizathu zokuthenga inkampani endala:
Zingathunyelwa kuwe ngosuku olufanayo lapho ubeka i-oda lakho.
Iba nomlando osheshayo wenkampani yakho.
Thuthukisa isithombe sakho bese ukhulisa isithombe sakho sebhizinisi.
Ngokushesha ukulandela imizamo yebhizinisi lakho ngoba inkampani isivele yakhekile futhi isilungele ukulethwa ngokushesha.
Ngokushesha ukuthola amalayisense ebhizinisi ngoba inkampani isezandleni zakho ngokushesha okukhulu.
Ikhono elisheshayo lokubhida kuzinkontileka ngoba inkampani ingathunyelwa ngokushesha.
Njengoba sisho kwezinye izingxenye zalesi sigaba, qiniseka ukuthi usebenzisa ukudalulwa okugcwele. Vumela labo oqhuba ibhizinisi nabo bazi ukuthi usanda kuthola inkampani endala. Izinzuzo ezifakwe kuhlu zingumbono wethu kuphela futhi zingahle zingasebenzi ezimweni zakho.
Uhlu Lwezinkampani Zeshelf
Shayela uhlu oluphelele olutholakalayo izinkampani zamashalofu. Sinohlu oluphelele ngokuchofoza isixhumanisi ngenhla. Zonke izinkampani zethu ezisekhefini zikhululekile kunoma yisiphi isikweletu esaziwayo. Ngakho-ke, bakulungele ukwenza ibhizinisi ukuze ukwazi ukusebenzisa ngokunenzuzo ibhizinisi ebelikhona isikhashana.
Ama-Shelf Corporations anesikweletu Esimisiwe
Kukhona ezinye izinkampani ezihleli eshalofini esevele sezisungule izikolo izikweletu. Izinzuzo ezinalezi zinto zinkulu kakhulu. Okokuqala, inkampani isingavele iboleke imali ngaphandle kwayo ngaphandle kwesiqinisekiso somuntu siqu kusuka kumphathi noma kumqondisi ngaphambi kokuthi kutholwe ngumnikazi omkhulu. The amashalofu ezinkampanini ezinesikweletu esisunguliwe kungadala amathuba amakhulu njengokutshala imali yendawo, ukuqala ibhizinisi, ukuthola imoto noma ukuboleka imali. Lokhu kungaba usizo ikakhulukazi kumuntu ongenaso isikweletu esiphelele noma kulowo ofuna ukuboleka imali ngaphandle kokwenza isikweletu sakhe. Inhlangano enjalo ngokujwayelekile izoba ne-akhawunti yasebhange endala. Lokhu kuncike ekutholakaleni kanye nemvelo ebolekisayo futhi azikho iziqinisekiso.
Izinkampani Zeshelf Canadian
Ngaphezu kwezinkampani zase-US nezaphesheya kwezilwandle, sinohlu lwezinto ezitholakalayo ezisungulwe eCanada, omunye wabalingani abakhulu bezentengiselwano ne-US. Enye yamawebhusayithi ethu yi- canadiancorp.com. Sungula izinkampani ezifundazweni kuzo zonke izifundazwe kanye nezinhlangano ezihlanganayo zaseCanada. Ngakho-ke, nathi sinakho Izinkampani zamashalofu zaseCanada ziyathengiswa ngezikhathi ezithile.
Leli gama liyafana namanye amagama asetshenziswe lapha. An inkampani endala yamashalofu yinkampani noma i-LLC eyakhiwe ngaphambi kwanamuhla ebihleli eshalofini ilungele ukutholwa ngumuntu odinga inkampani eyakhiwe phambilini. Imvamisa abantu bathenga izinkampani ezinjalo eNevada, Wyoming noma eCalifornia kanye naseDelaware.
Izidumbu zamashalofu ziyefana nezinkampani zamashalofu. Kumane nje kuyindlela efushanisiwe yesisho. Igama elilodwa esikubonayo lithi “amashalofu izidumbu ngesikweletu esisunguliwe, ”okufana nalokho okuxoxwe kwenye indawo kuleli sayithi lapho ibhizinisi selivele linaso isikweletu noma amaphuzu asunguliwe wePaydex. I-Paydex inguphawu lokuthengisa olubhalisiwe lukaDun noBradstreet, inkampani ebika isikweletu ngokubambisana. Kwesinye isikhathi izinhlangano ezibikayo zifuna umnikazi omusha asungule isikweletu kusuka ekuqaleni lapho inkampani isishintshile izandla. Ngakho-ke, kuleso simo ube nolunye uhlelo olunikeza usizo ekwakheni izikolo ezintsha zesikweletu.
Ngakho, aIzinkampani zamashalofu, izinkampani ezisebenzisa amashalofu futhi inkampani yamashalofu Ukwakheka kunikeza izinzuzo ezinkulu ngokuya ngokwethembeka, ukuthola ubudlelwano obusha bebhizinisi nokuvikelwa kwezimali nempahla okungenzeka.
Ngokwemvelo, le ndatshana ayenzelwe ukuba isisetshenziswa esiphathelene nalolo daba. Kungenxa yezinhloso ezijwayelekile zokukhonjwa futhi akuhloselwe ukumboza inani elingenamkhawulo le "yebo buts", futhi "ukhohliwe ukusho." Iphuzu eliyinhloko ukuthi, ukusetshenziswa komqondo ojwayelekile, ukuthembeka nokwahlulela okuhle.
Uku-oda iNkampani yeShelf, sicela ushayele inombolo yethu yamahhala bese ukhuluma nomunye wochwepheshe bethu abazokusiza ngentokozo. Sicela ushayele uMsombuluko kuze kube uLwesihlanu phakathi kwamahora we-7: 00 AM ne-5: 00 PM Pacific Isikhathi.